About Us - Shanghai Best Shiinaha Industry Co., Ltd.
dhalada galaas Tube
Buufin dhalo barafuun
dhalada walax Glass
dhalada Tube la cap
dhalada cadar Glass
dhalada lotion Glass iyo ubbo
Dhalada Glass lotion
dhalada lotion bamka Aluminum
dhalada lotion bamka caaga
Glass cream weel
dhalada lotion looxa iyo ubbo
weel cream looxa
dhalada lotion looxa
dhalada godadka iyo ubbo
dhalada saliid lagama maarmaan
Dhalada caaga iyo ubbo
tube caag ah
dhalada Aluminum iyo ubbo
Jidka Our xirxirida
Certificate of Maamuusta
Qashinka BEST waa shirkad dhamaystiran oo isku-soo-saarka, qayblibaaxna iyo adeega oo dhan muhiim ah. Waxaan ku takhasusay soo saara cadar iyo daryeelka maqaarka baakadaha ay ku jiraan cadarka, dhalooyin iyo dhalooyinka, dhalooyin caag ah iyo dhalooyinka, dhalooyinka godadka iyo dhalooyinka, dhalooyinka looxa iyo dhalooyinka, iyo sidoo kale ay kiciyaan oo buufiyeyaasha, bambooyin lotion, buufiyeyaasha cadarka.
Our warshad ku taala magaalada ugu firfircoon ee gobolka Asia-Pacific, Shanghai. Dhamaan waxyaabaha ka design, caaryada furan, muunad, wax soo saarka, frosted, heerkulka sare hal-midabka iyo daabacaadda multicolor, gilt (lacag) jediyay, rinjiyeynta, ururinayo si loo gaaro bixinta adeegyada one-stop. Cuntooyinkan qalabka doorashada, ka alaabta ceeriin, maaddooyinka, nidaamka barafku, la xirrira, annealing, processing, imtixaanka, baakadaha iyo talaabooyin kale oo wax soo saarka ay dhammaadaan hoos nidaamka tayada ISO90002.
At qashinka BEST, waxaan kaliya aan lahayn xulashada ugu badan meel kasta oo ka mid ah dhalooyinka iyo baakadaha caaga ah, laakiin sidoo kale waxaa had iyo kobciya our kala duwan soo saarka. By isku adeegga macaamiisha khabiir 'jawaabta degdeg ah, waxaan sidoo kale waxay leeyihiin shirkadda ganacsi oo noo gaar ah oo caalami ah in Shanghai. Waxaan leenahay waayo-aragnimo badan ee ilaalinta tayada, suuq caalami ah, dhoofinta, saadka, sidaas darteed waxaan noqon kartaa indhaha iyo dhegaha ee Shiinaha si loo hubiyo in aad siin wax soo saarka xaq at qiimaha ugu wanaagsan, oo leh waqti gaaban hogaanka.
Our shaqo waa in ay:
● Bixinta Innovate Solution Baako
● La kulan ama ka badan baahida iyo rajooyinka Macaamiisha our '
● Bixinta tayo leh ka xoogbadan, ee baakadaha macaamiisha loo qorsheeyay
● bixinta On-time
● Waxaan filaya in ay soo koraya labada dhinac oo kaashanaya macaamiisha adduunka oo dhan
Cinwaanka: Rm.1202, NO.2, No.533 Anbo Rd, Yangpu, Shanghai, Shiinaha